DHABAR U SEEEXI, CIYAARTA DHABACASHADA
Waa maxay sababta sabiyada loogu seexiyaa dhabarka?
Akameediyada Ilmaha ee Maraykanka (American Academy of Pediatrics) waxay soo jeediyeen waxyaalaha soo socda, si ay u yarayso khatarta ah Kadis u Dhimashada Sabiga [sudden Infant death syndrome]-(SIDS) iyo dhimashooyinka kale ee la xiriira hurdada, sida neefta oo ku xiranta.
Dhamaan sabiyada caafimaadka qaba waa in loo seexshaa dhabarka, laguna seexshaa xool amaan qabka ka gudbay ama waxyaalaha kale oo ilmaha lagu cayaarsiiyo oo ay saaranyihiin joodari adag, hadan lagu goglay go’ le’eg.
Xoolka madaxiisu waa in uu simanyahay, haddii aan dhakhtarkiisu soo jeedin si kale caafimaadka ilmahaaga awgeed.
Ka ilaali xoolka gudihiisa waxyaalo isla dhex yaal si (barkimooyin, bustayaal, xafaayado) iyo boombalayaal jilicsan.
Tixgali inaad u xirtid buste la xiran karo, si aad u diirisid sabiga, inta aad saari lahayd buste fidsan.
Ilmaha ku hay isku qol, laakiin ha saarin isku sariir. Sabiyada iyo ilmaha ka yar 2-da sano waa in aysan ku seexan isku sariir ama aysan kula seexan qof kale, sababta oo ah in laga ilaaliyo in aan neeftu ku xirmin. Haddii aad sabiga keentid sariirta si aad u siisid naaska, ku celi xoolkiisa ama meelaha uu ku ciyaaro marka aad u dhamaysid.
Waxaad afka u galin kartaa cinjirka sasabida marka aad seexinaysid. Marka sabigu gam’o oo uu ka dhaco cinjirku ha ku celin afkiisa.
Sabiyada isroga waa in loo seexiyaa dhabarka, laakiin loo ogolaadaa in sida ay rabaan u seexdaan, uma baahnid in aad rogtid ama dib aad ugu celisid dhabarka.
Maxay seexinta dhabarku u samaysaa ilmahayga?
Soo jeedinada la soo jeediyay awgood, kadis u dhimashada sabiyadu (SIDS) waxay hoos u dhaceen 50%. Isla wakhtigaa, madax balaarashadu ( plagiocephaly) ama (head flattening) iyo muruqyada surka oo dhinac ka adkaada (torticollis) ama (a one-sided tightness in neck muscles) way siyaaday.
Sabiyada qaar baa u badan in ay madaxooda u leexiyaan dhinaca ay jecelyihiin marka ay u jiifaan dhabarka. Tani waxay waxyeeli kartaa koritaankooda. Waxaa dhibaato ku noqonaya in ay muruqyada surka labadiisa dhinac ay is xoog le’ekaadaan, sidoo kale in ay bartaan in ay isticmaalaan jirka labadiisa dhinac.
Sidee uga hortagi karaa dhibaatooyinkaa?
Dhabar-dhabar u seexi ilmahaaga, kala badal meesha madaxiisa aad dhigaysid, si uusan culayska u saarin hal dhinac. Ama kala badal dhinaca aad u dhigaysid (dhanka cagaha markaas u badal dhanka madaxa) sidaas awgeed ilmuhu wuxuu jaleecayaa dhanka dhaqdhaqaaqu ka jiro qolka.
Haddii ilmahaagu mar walba madaxiisu hal dhinac u yaal, isku day in aad badashid dhinaca xoolku uu u jeedo ama ka fur meesha waxyaalaha uu jecelyahay in uu fiirsado ilmuhu.
Waxyaalaha qaar baa sheegta in loo sameeyay in ay ilmaha ku hayn karaan hal dhinac. Qalabkaas lama tijaabin amaankooda sidaas darteed idinkuma dhiiringalinmayno.
Xadid isticmaalka boombolayaasha sida wiifowyada, kuraasta sabiga, iyo kuraasta boombalayaashu ku xiranyihiin. Marwalba isticmaal kursiga baabuurka marka aad safraysid, laakiin ka saar ilmaha marka uu safarku dhamaado. Marka sabigu soo jeedo, sabiyadu waxay u baahanyihiin in la hayo, ama aad dhulka dhigtid si uu u sahmiyo aduunkiisa una kobciyo muruqyadiisa sida si ugu badan.
Marka ilmuhu soo jeedo oo aad fiirinaysid, ilmahaagu wuxuu u baahanyahay in uu wakhti badan galiyo dhabacashada. Wakhtiga dhabacashadu wuxuu xoojiyaa dhabarka, surka, iyo muruqyada gacmaha , taasoo siinaysa awooda ah in uu madaxiisa kor u qaado, isrogo, fariisto, gurguurtana. Wakhtiga dhabacashadu sidoo kale wuxuu u fiicanyahay aragtida iyo maskaxdaba sababta oo ah waxaa lagu dhiirigalinayaa in uu fiiriyo goonyihiisa uuna sahmiyo aduunkiisa.
Dhakhsahaad ugu bilowdid dhabacashada, waxay gaarsiinaysaa dhakhso in uu ula qabsado, faa’iido ka helo, una gaaro in uu jeclaado. Sabiyada wakhtiga badan aan galin dhabacashada waxay u baahnaan doonaan wakhti dheeraad ah oo lagu dhiirigaliyo in uu barto dhabacashada. Halkaan waxaan kugu hayaa afkaar yar oo kaa caawinaysa sabigaaga in uu ka helo dhabacashada. Xusuuso, wakhtiga dhabacashada ilmaha waa inlala joogaa – marna ha cidlayn ilmaha oo dhabacan ama si u yaal.
Wakhtiga dhabacashada wuxuu ugu fiicanyahay marka uu sabigu nasiino qabo, faraxsanyahayna.
Ku bilow 5 daqiiqo oo wakhti dhabacasha ah mar walba oo uu soo jeedo, si tartiib- tartiib ahna u gaarsii ilaa 20 daqiiqo.
U dhig boombalayaasha uu jecelyahay meel uu ka gaari karo. U shid muusiko.
Dhig muraayad sabiga hortiisa.
Sabigaagu waxa u horeeya uu u baahanyahay waa kobac awood u siiya in madaxiisa kor uu u hayo, uuna ciyaaro. Haddii ay ku adagtahay in uu ku ciyaaro marka uu dhulka fadhiyo, U leexi ilmahaaga xagal, taasi waxay u sahlaysaa in uu madaxiisa soo celiyo.
Barkin yar (sida Boppy® pillow).
Shukumaan duub oo gali hoosta gacmaha iyo xabadka sabiga.
Cinjir yar oo xagal leh.
Sabiga dhinac-dhinac ugu jiifi dhabtaada marka aad fadhido, ama saar shafkaaga marka aad ku tiirsantahay kursiga fadhiga ama marka aad u jiifsatid dhabarka oo barkin aad madaxa saartid. Sabigaagu wuu ka heli doonaa kulayka jirkaaga iyo garaaca wadnahaaga.
Fariiso dhulka sabigaaga hortiisa ah, markaas u hees ama u sheekee adinkoo isfiirinaya.
Haddii ilmuhu daalay, nasi xoogaa, ama kor u qaad, kadibna dhabac u dhig.
Sabur u yeelo. Marka u horaysa waxaa suurtowda in uu ku dhibtoodo, laakiin waa muhiim in mar walba aad isku daydid. Markuu sii xoogsadaba, dhabacashadu waxay noqon doontaa mid uu ka helo. Faa’iidoonyinka uu ka helayaa way istaahilaan in loo maro dhibtaa.
Maxaa kale oo aan u baahanahay in aan ogaado?
La hadal ayeeyooyin iyo awoowooyin, dhakhaatiirta, iyo ilaaliyaasha ilmaha. Hubi in qof qof kasta oo ilmaha daryeelaa in uu yaqaan amniga hurdada:
Hurdo kasta waa tirsantahay! U seexi ilmaha dhabarka si amni ku jirto-xoolka la isla ogolaaday.
Ka ilaali waxyaalaha jiljilicsan gudaha sariirta sida:
Dhabici sabiga marka uu soo jeedo, lana joogo.
Warqadaani gaar uma ah sabigaaga, laakiin waxay ku siinaysaa macluumaad guud. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaabka seexashada ama kadis u dhimashada sabiga (SIDS), fadlan la hadal kooxdaada daryeelka.
Waxaa la muraajiceeyay 6/2017